မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာမရှိလို့ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီပြောကြား မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဟာ ဘယ်တုန်းကမှ မပါဝင်ခဲ့ဘူးသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဆိုတာလည်း မရှိဘူးလို့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူအင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မူစလင်တစ်ယောက်ကပြေားဖူးပါတယ်...2020 ခုနှစ်ေ၇ာက်၇င် မြန်မာပြည်ဟာမူစလင်နိုင်ငံဖြစ်မယ်လို့ပါ။
Sep 07, 2012 03:04 PM
၀န်ကြီးဦးခင်ရီြေ့ပာတာမှန်ပါတယ် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ မပါတဲ. အမျိုးတွေပါ သူတို.တွေကို လူ.အခွင်.အရေးလို.အော်နေကြတဲ. နိုင်ငံတွေဆီကို ပို.ပေးလိုက်ကြပါ
RAKHINE IS DANGEROUS THAN SNAKE"""""
လူကြီးမင်းက ဘာဖြစ်လို. ရခိုင်တွေကို အဲလိုပြောရတာလဲ လူကြီးမင်းက ကုလားဆိုရင်တော. မှန်မှာပါ
မှန်လိုက်လေ။ မြန်မာမှာ မပြောနဲ့ ကမ္ဘာတော် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ လိမ်လည်လုပ်ကြံသမိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလီ တွေပါ။ ရခိုင်မှာ မွတ်စလင်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ ကမန် လူမျိုးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သူတို့က ရခိုင်ပြည်မှာ လူလို နေနေတဲ့ လူမျိုးပါ။ လူလိုမသိ ကျေးဇူးကန်း ကျွေးတဲ့လက်ကို ပြန်ကိုက်တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို လူအခွင့်အရေးလို့ပြောတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီ ကို ပို့ပေးလိုက်ကြပါ။